मेरो ब्लगिंग कार्ड आइपुगेको छ! | Martech Zone
मेरो ब्लगिंग कार्ड आइपुगेको छ!
मंगलवार, सेप्टेम्बर 18, 2007 शुक्रबार, जनवरी 6, 2017 Douglas Karr
एक पटक म कन्फरेन्समा बोल्न सकें, मलाई प्रायः केही मान्छेहरू द्वारा ब्यापार कार्डको लागि सोधिएको हुन्छ। व्यापार कार्ड? एक ब्लगर को लागी? Few सम्मेलनहरू केहि महिनाहरूमा आउँदैछ, मैले निर्णय लिने निर्णय लिएँ र वास्तवमै केहि व्यापार कार्डहरू बनाउने योजना बनाएँ! मलाई थाहा छैन कति मानिस हिंडिसकेपछि मैले कति व्यापार हराउन सक्छु र म को हो भनेर सम्झना गरेन।
कार्डहरू आज आइपुगे र मलाई लाग्छ उनीहरू राम्रा देखिन्छन्:
कार्डहरू द्वारा बनाईएको थियो भिस्टा प्रिन्टयो 5th औं वा 6th पटक हो जब मैले तिनीहरूसँग व्यापार गरेको छु। तिनीहरूले केहि विशिष्ट डिजाइनको साथ निःशुल्क सादा व्यवसाय कार्ड प्रस्ताव गर्दछ - वा तपाईं सबै बाहिर जान सक्नुहुन्छ। मैले तिनीहरूसँग स्टकमा रहेको पृष्ठभूमि छवि माथि मेरो आफ्नै डिजाइन गर्न छनौट गरे। मैले एक चम्किला मोर्चा र कालो र सेतो फिर्ता पाएँ। एक स्वरूपण टिप ... तिनीहरूको अनलाइन सम्पादक प्रयोग गरेर, तपाईं अर्कोमा एक लेयर राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो ब्लग शीर्षक मा र URLम कालो फन्टमा सेतो प्रयोग गर्छु जसले गर्दा यो नीलो पृष्ठभूमिसँग बाहिर खडा हुन्छ।
शिपिंगको साथ, यसले 50०० कार्डको लागि मलाई ran 500 सम्म दौड्यो। मलाई लाग्दैन त्यो एकदम खराब छ! तिनीहरूले मलाई सम्झने पहिलो व्यक्तिसँग आफैं भुक्तान गर्नेछन्। 🙂
मैले एक पटक मेरो बुबाको लागि केहि कार्डहरू बनाएको थियो र उनीहरूले एउटा शब्द काटिदिए। जति छिटो मैले सम्पर्क गरेन भिस्टा प्रिन्ट, तिनीहरूसँग नयाँ सेट सच्याएको थियो र मेरो बुबालाई रातीमा राख्नु भयो। म उनीहरूको सेवाबाट धेरै प्रभावित छु।
मलाई पक्रन निश्चित हुनुहोस् मार्केटिंग प्रोफेसर B2B सम्मेलन शिकागो मा आउँदै! म ब्लगिंग प्यानल मा हुनेछु। रोक्नुहोस् र म तपाईंलाई मेरो कार्ड दिन निश्चित छु।
टैग: ब्लगिंग कार्डहरूव्यापार कार्डहरूकार्डdouglas karrमार्केटिंग टेक ब्लगमार्केटिंग टेक्नोलोजी ब्लगभिसाप्रिन्ट
म FPAM बाट थाकेको छु
भेरिजनले आज राम्रो गर्यो! AT&T यति राम्रो छैन ...
सेप्टेम्बर 18, 2007 बेलुका 11:45 बजे
नमस्ते डग। मैले देखेको छु कि तपाईंले आफ्नो ब्यानर र लोगो पनि अपग्रेड गर्नुभएको छ। यो राम्रो देखिन्छ। तपाईंले यो कसरी गर्नुभयो?
तपाईं सम्मेलनको काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दा राम्रो लाग्यो। मैले 10 वर्षमा सार्वजनिक रूपमा बोलेको छैन र म ब्लग वर्ल्डको बारेमा अलिकति नर्भस महसुस गर्दैछु। कुनै सुझाव?
जय हो दाजु !
सेप्टेम्बर 19, 2007 मा 6: 44 AM
धन्यवाद पुन: ब्यानर। मैले यो Adobe Illustrator र Photoshop प्रयोग गरेर गरें। हेडसटमा फोटोशप, पाठमा इलस्ट्रेटर। म केही वर्षको लागि दुबै अनुप्रयोगहरूसँग गडबड गरिरहेको छु, त्यहाँ एक राम्रो ठाडो सिकाइ कर्भ छ (म साँच्चै फोटोशपमा राम्रो छैन!) यदि तपाइँ त्यो बाटो जाने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, आँखा राख्नुहोस् बिटबक्स - त्यहाँ उत्कृष्ट सुझावहरू, निःशुल्क र ट्यूटोरियलहरू छन्।
सम्मेलनको कुराले मलाई नर्भस र उत्साहित दुवै बनाउँछ। मलाई लाग्छ कि ब्लगरहरूका लागि यो सजिलो छ किनकि हामीले साइटमा हरेक दिन बोल्ने 'अभ्यास' गर्छौं। कुनै पनि सार्वजनिक बोल्ने कुञ्जी तपाईको सामग्री जान्नु हो - र ब्लगर भन्दा ब्लगलाई कसरी राम्रोसँग थाहा हुन्छ?!
आरामसँग बोल्नु समयसँगै आउँछ। तपाईंले कुरा गर्न सुरु गर्नु अघि प्रत्येक जवाफको बारेमा सोच्नुहोस् - यसले धेरै मद्दत गर्दछ। कहिलेकाहीँ म सबैका लागि प्रश्न दोहोर्याउँछु र यसले मलाई एकसाथ विचार राख्नको लागि समय दिन्छ। यदि मैले तुरुन्तै हिपबाट गोली हान्न प्रयास गरेमा म बडबड गर्छु र झन् गडबड गर्छु भन्ने मैले फेला पार्छु।
भाग्यले साथ दिओस्! यो रमाइलो कुरा हो!
सेप्टेम्बर 19, 2007 मा 2: 14 AM
कार्डहरू धेरै राम्रो देखिन्छन्! तपाईको सम्मेलनमा शुभकामना छ।
धत्तेरिका! त्यहाँ फेरि कोट र टाई छ! '-पु
(यद्यपि राम्रो डिजाइन! 🙂